Gallery အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
2.4.47 for Android
4.3 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（18.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
ဓာတ်ပုံပြခန်းသည် Galaxy အသုံးပြုသူများအတွက်အလုပ်လုပ်သော Image & Video Views အတွက်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်။ သင်၏ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးမြသောလမ်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Glamaxy စမတ်ဖုန်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ပုံရိပ်နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်ကို 2022 အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ထည့်သွင်းပါကအကောင့်။ Application အသစ်ကိုအလွယ်တကူအသစ်ဖွင့်ထားသော Galaxy ၏ပြခန်းအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ ပြခန်း Vault ကို Update လုပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုပါ0င်သည်။
ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုပါ။ Pict Pics သည်သင်၏ Android နှင့်သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများအားလုံးနှင့်အတူသင်နှင့်အတူပိုမိုစမတ်ကျပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သော, သင်ယနေ့ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးပုံနှင့်မျှဝေထားသောအယ်လ်ဘမ်များကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များပါ0င်သည်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများသည်အလိုအလျောက်စနစ်တကျစီစဉ်ပြီးရှာဖွေနိုင်ပြီးသင်ရှာဖွေနေသည့်ဓာတ်ပုံကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုမျှဝေပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောယခုအချိန်တွင် Tools2 နှင့် Smart Filters တို့နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော finish ကိုပြီးပြည့်စုံသော fight ကိုပေးပါ။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့ပြခန်းတွင်ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ ကင်မရာလိပ်နှင့်အတူကောင်းသောအထိမ်းအမှတ်အကြောင်းအရာကိုပြခန်းပြခန်း Piktures ။ ဒီတော့ဒါကပြခန်းနဲ့အမြန်ပုံပါ။
ဓာတ်ပုံများအတွက် Fast HD ဓါတ်ပုံများ, ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်အတွက် apping app ကိုရယူပါ။ ပြခန်းသည် ရုပ်ပုံပြခန်း, ဓာတ်ပုံမန်နေဂျာနှင့်အယ်လ်ဘမ်အက်ပ်။
■■တစ်သက်တာဓာတ်ပုံများ။ မင်းအတွက်ပဲကုသပေးခဲ့တယ် နေ့တိုင်း, လနှင့်နှစ်များကိုလှပသောကြည့်ရှုပါ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုညှိရန်အတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာများ။
သင်၏ကင်မရာလိပ်မှယူထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုမူလဒေတာများကို အသုံးပြု. သိမ်းဆည်းထားသည်။ Time Stamp နှင့်တည်နေရာအချက်အလက်များကို Exif အချက်အလက်နှင့်အတူမူရင်းဖိုင်အမည်နှင့်အတူပါ0င်သည်။ ထို့အပြင် app ထဲသို့တင်သွင်းသောဒေတာများကိုသင်လိုချင်လျှင် Google Cloud
တွင် Google Cloud
■ Pin ကာကွယ်မှု
: ပြခန်းတွင်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည် Numeric PIN နံပါတ်ကိုကာကွယ်ထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများအတွက်။ အသုံးပြုသူသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းများ, Hot Photos, Naughty Photos, Dirty Photos, Dirty Photos များ, လျှို့ဝှက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဓာတ်ပုံများသော့ခတ်ထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဓာတ်ပုံများတပ်ဆင်ထားသည်။
> Gallery Locker
Gallery Loclege Apps များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၏ကိုယ်ပိုင် privacy ကိုကာကွယ်ရန်လုံးဝလိုအပ်နေသည်။
■ဖုန်းပြခန်းသည် Galeria အတွက်စမတ်ဖုန်းပြခန်းဓာတ်ပုံပုံတင်ဖြစ်သည်။ ဒီ Android Gallery နှင့်ပြခန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ ပြခန်းသည်စမတ်ပြခန်း, format ပြ gallery, format ပြ gallery နှင့်အတူဤ Android Gallery နှင့်အတူ collection ပြခန်း။
u slide show
: သင်၏ Android ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဆလိုက်ကြည့်ရှုပါ ပြခန်း > Gallery 2022 ပြခန်းတွင် ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ် Creator
တွင် Secret Photo album> >
လှည့်, သီးနှံများ, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အရောင်များ, အရောင်များဖန်တီးခြင်း
ကင်မရာ Roll Br >> Save Save Rold
- မိတ္တူကူးယူပါ - Slideshow: Slideshow - Message Support - Slideshow - Message Support
- လူမှုရေးအပေါ်မျှဝေပါ မီဒီယာ
Delete Burmese Superize Listing အမိန့်နှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်း, သင့်ဖုန်းကိုရှာသည် ဒါကြောင့် Galerie ကို "အမြန်ပြခန်း" လို့ခေါ်တယ်။
Android app ကို download လုပ်ပါ။
Mungyo Soft Oil Pastels Vs Mungyo Oil Pastels ~ Best Oil pastels to Buy
Mungyo Gallery Soft Oil Pastel Review | Professional
UNBOXING GALLERY SOFT PASTELS | GALLERY VS CAMEL WHO IS BETTER..?
Artist ARJUN SINGH